Raveloaritiana Mamisoa · Novambra 2011 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Novambra, 2011
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2872 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Novambra, 2011
Afrika Mainty28 Novambra 2011
Shina: Mpiasam-Bahoaka Namono Tena Rera-tsaina Ve Sa Norerahan-tsaina?
Azia Atsinanana28 Novambra 2011
Araka ny fanadihadiana nataon'ny manampahefana sinoa dia toa hoe mihabetsaka ireo mponina Sinoa no tratran'ny aretin-tsaina amam-panahy. Malaza moa fa rehefa nozahana dia marary saina amin'ny karazan'aretina toy ny Fikorontanana Vokatry ny Fifikirana Tafahoatra izay olon-tsotra manao fanangonan-tsonia manohitra ny tsy rariny sy ny kolikoly manjaka eo amin'ny firenena. Vao...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Novambra 2011
Nolazain'ny fitondrana ao Bahrain fa araka ny lalàna iraisampirenena no ifehezany ny mpanao fihetsiketsehana. Saingy nanangom-baovao na nandrakitra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mitranga any kosa ny mpisera ka mametraka ireny an-tserasera ho hitan'izao tontolo izao. Ato amin'ity lahatsoratra ity no anangonan'i Mona Kareem ny lahatsary nivoaka an-tserasera mampiseho ny ataon'ny...
Koety : Fisamborana Mpisera Twitter Hafa Indray
Koety13 Novambra 2011
Hamad Al Olayan miaraka amin'ny rainy sy ireo zanany taorian'ny fahafahany Nandia fotoan-tsarotra ny fahafahana maneho hevitra amin'ny alalan'ny serasera tamin'ity taona 2011 ity tao Koety. Mbola tsy niharan'ny fanorisorenana matetika tahaka izao ny mpiserasera raha tsy tao anatin'izay volana maromaro izay. Nanomboka ny volana aprily lasa teo, mpiserasera telo...
Karaiba12 Novambra 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Novambra 2011
Efa-bolana lasa izay, nosamborin'ny polisim-panjakana ny mpisera Twitter roa sy mpisera YouTube. Tamin'ny Alakamisy 3 Novembra 2011, mpisera Twitter roa no nampanantsoina ary notazonin'ny mpampanoa lalàna noho ny fandikana ny andininy faha-54 amin'ny Lalampanorenana Koesiana izay mametraka fa: “Ny Emira no Filohan'ny Fanjakana. Tsy azo kitihina sy tsikeraina ny tenany.” Tao anatin'ny...